के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा? – List Khabar
Home / रोचक / के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा?
के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा?
admin December 8, 2021 रोचक Leaveacomment 707 Views
Previous नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएका दुई जनाको रिपोर्ट यस्तो आयो
Next अ‍ाेमिक्राेनलाई अहिले प्याेगमा अ‍ाएकै खाेपले काम गर्छ: डब्लूएचओ